Zello अपरेशन - नेटवर्क रेडियो
घर / Zello अपरेशन
श्रेणी: Zello अपरेशन
प्रकाशित अगस्ट 9, 2018 सेप्टेम्बर 21, 2018
जेरो Inrico T192 स्क्रिनलेस रेडियोमा
नेटवर्क रेडियो उत्साहीहरूका लागि रोचक समाचार! Inrico सुरु भयो T192, को एक सुधारिएको संस्करण T199.
जे होस् म T199 को ठूलो प्रशंसक हुँ मैले स्वीकार्नु पर्छ T192 राम्रो चाल थियो।
म डिजाईनबाट सुरू गर्नेछु। आकार आयताकार छ, लोकप्रिय मोटोरोला रेडियो सम्झाउँदै। मैले सँधै T199 धेरै सानो पाएँ, मलाई बच्चाहरूको लागि वाकी-टाकी सम्झाउँदै। T192 भारी, बाक्लो छ र सबै भन्दा माथि, IP54 हो, T199 भन्दा फरक।
थप सुरक्षा दिनको लागि, ब्याट्रीको आफ्नै लकर छ (मलाई शंका छ कि तपाई गल्तिले ब्याट्री माध्यमिक लकर प्रयोग नगरीकन पनि हटाउन सक्नुहुनेछ)। यी साना विवरणहरूले T192 लाई वास्तवमै खम्बा रेडियो बनाउँदछ!
अडियो, सामान्य रूपमा एक वास्तविक उच्च आवाजमा सेट गर्न सकिन्छ, एउटा कुरकुरा-पूरा स्पिच ध्वनि बनाएको बेला। म निश्चित छु कि यो रेडियो एक शीर्ष विक्रेता हुनेछ।
तपाईलाई सम्भवतः थाहा छ, यी रेडियोहरू पेशेवर प्रयोग र PTT4U जस्ता सेवाहरू चलाउनका लागि निर्माण गरिएका हुन्। त्यसोभए तिनीहरू सेटिंग्सका साथ गडबडी र अनावश्यक अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्न चाहँदैनन्। यस्तो संग, मा T192, Inrico USB सकेट हटायो ताकि एक "सामान्य" प्रयोगकर्ता कन्फिगरेसनमा कुनै परिवर्तन गर्दैन।
USB अझै छ, यद्यपि यो लुकेको छ। तपाईंले एउटा सानो संलग्न गर्नु पर्छ --पिन एडेप्टर (प्रोग्रामिंग केबल सहित समावेश गरीएको) र टेलोड कन्ट्रोल सफ्टवेयर प्रयोग गरेर सबै कन्फिगरेसनहरू रेडियोमा गर्नुहोस्।
सबै नेटवर्क सेटिंग्स mic / ईरफ़ोन सकेट को माध्यम बाट गर्नु पर्छ, प्रोग्रामिंग केबल को उपयोग गरेर। तपाईलाई यो चाहिन्छ सफ्टवेयर र UART ड्राइभरहरू यसलाई प्रयोग गर्न।
देखि V4.14, Zello T100 को साथ 192% संगत छ। तपाईं भोल्यूम परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ, PTT बटन प्रयोग गर्नुहोस् र च्यानलहरू डायल नोक प्रयोग गरेर चयन गर्नुहोस्। तपाईंले भर्खरै अनुसरण गर्न आवश्यक छ कन्फिगरेसन चरणहरू Zello द्वारा जारी
कहाँ T192 खरीद गर्ने?
यहाँ तपाईंको T192 अर्डर गर्नुहोस्
प्रकाशित जुलाई 11, 2018 जुलाई 11, 2018
Inrico TM-7 को मानक माइक्रोफोनको सुधार / समायोजन
बिभिन्न स्टेशनहरु बाट मलाई भनियो कि मेरो मोडुलन टीएम-7 बरु सानो थियो।
यसमा मैले मानक माइक्रोफोन (आन्तरिक) लाई इलेक्ट्रेट माइक्रोफोनको साथ बदल्ने निर्णय गरें।
आदेश मा बोझ छैन टीएम-7 थप, मैले उपकरणबाट आवश्यक भोल्टेज निकाल्ने छैन (माइक्रोफोन कनेक्टर मार्फत) तर इलेक्ट्रेट माइक्रोफोनको लागि बाह्य विद्युत आपूर्ति प्रयोग गर्ने निर्णय गरें।
यसको लागि आवश्यक छ:
१ - तीन तार इलेक्ट्रेट माइक्रोफोन (अलग + तार संग)
1 - बटन सेल ब्याट्री
1 - बटन सेल होल्डर
मैले नयाँ माइक्रोफोन तलको रेखाचित्र अनुसार कनेक्ट गरेको छु।
क्यूएसओ परीक्षणको एक संख्या पछि, समायोजन मानक स्थिति मा एक ठूलो सुधार साबित हुन्छ। यो मोडुलन राम्रो र पूर्ण छ र अब छिटो छैन भनिन्छ।
मार्सेल गोडेमान्स द्वारा
प्रकाशित जुन 12, 2018 जुन 12, 2018
संयम को आनन्द
वर्षौं पहिले, जब मैले पहिलो पटक एमेच्योर ब्यान्डहरू सुन्न सुरु गरें, अपरेटिंग अभ्यासहरू राम्रो थिए।
कलिंगन्स स्पष्ट रूपमा दिइयो, कलरको इरादाको रूपमा सम्पर्कको अन्त्यमा स्पष्टीकरण दिइयो, (अझै पनी निगरानी गर्ने, बन्द गर्ने, आवृत्ति परिवर्तन गर्ने वा जुनसुकै पनि)। तिनीहरू धेरै उपयोगी थिए "सूचकहरू" सम्पर्कमा के भइरहेको थियो र विशेष गरी म जस्तो श्रोताको लागि ठूलो।
अँध्यारो साइड ...
जे होस्, त्यहाँ सँधै केहि "mavericks" थिए। प्रायः यी व्यक्तिहरू बारम्बार दोहोर्‍याउँथे र तिनीहरूलाई आफ्नै, केही "विचित्र" उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग गर्थे।
यो संगीत बजाउने, अनौंठो "डरलाग्दो" आवाजहरू र कहिलेकाहिँ डाउनराइट घृणित भाषा सुन्नु कुनै असामान्य कुरा थिएन। यो त्यस्तो प्रकारको कुरा थिएन जुन तपाईं आफ्ना बच्चाहरू वा नातिनातिनाहरू सुन्न चाहनुहुन्छ। यो त शौकको विज्ञापन गर्न धेरै गरेन।
किन? किन? किन?
हामी त्यस्ता लोकको मनसायको लागि सँधै अनुमान लगाउन सक्छौं र वास्तवमा त्यहाँ केही मानसिक मुद्दाहरू पनि समावेश हुन सक्दछन्।
तर तथ्य यो छ कि एमेच्योर ब्यान्डहरू थिएनन् (र हिम्मत म सुझाव दिन्छु, आज पनि पनी अझै छैन) तपाईले युवाहरुलाई स्वतन्त्र हिड्न दिनुहुनेछ।
हामी एमेच्योर ब्यान्डमा क्रियाकलापको अभावको लागि विलाप गर्दछौं (प्रतियोगिता बाहेक, तर त्यो धेरै नै "मारमाइट" विषय हो जुन मैले हाललाई त्याग्ने छु) तर यो केही हदसम्म हाम्रो हातबाट बाहिर छ।
हामी सुन्न चाहँदैनौं भन्ने किसिमको व्यवहार प्रचलनमा परिणत छ, दुःखको कुरा छ - र हामी यस बारे केही गर्न सक्दैनौं जस्तो देखिन्छ।
चाहे १ “मेगाहर्ट्जको अधिक" कुख्यात "ओगटेन्टहरू वा २ मिटरमा स्थानीय बेवकूफहरू, हाम्रो इजाजतपत्र अधिकारीहरू शक्तिहीन, वा असक्षम जस्तो देखिन्छ, वा हुनसक्दैन समय र स्रोतहरू, हाम्रो ब्यान्डहरूलाई प्रभावकारी रूपमा पुलिस गर्न।
समय यो थियो कि यसले तपाईंको इजाजतपत्रका सर्तहरू बाहेक धेरै बाटो बिराएको छैन कि तपाईंले GPO (युकेमा) बाट अफिसर्सको एकदम शीघ्र र स्पष्ट भेटको आशा गर्न सक्नुहुनेछ - धेरै इजाजतपत्रहरू खण्डनको खतरामा थिए र धेरै उपकरणहरू प्रतिबन्धित थियो।
कुनै पनि अधिक यो लाग्दैन। हामीसँग आर्थिक सर्तमा एउटा "नि: शुल्क" इजाजतपत्र हुन सक्छ, तर त्यससँग हाम्रो कम्योर एमेच्योर ब्यान्डहरू कसरी नियन्त्रित हुन्छन् भन्ने कुरा कमै आउँदछ।
डिजिटल टेक्नोलोजी प्रविष्ट गर्नुहोस्
२१ औं शताब्दीमा, हामीसँग डिजिटल टेक्नोलोजी छ जसले हामीलाई हाम्रो "अनलाइन संसार" लाई अझ प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न अनुमति दिन्छ।
र यो नेटवर्क रेडियोको एउटा पक्ष हो जुन म आज तपाईंको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु।
"पछाडि नियन्त्रण लिनु"
जेलो यी उपकरणहरू द्वारा प्रयोग गरिएको मनपर्ने PTT अनुप्रयोग हो - त्यहाँ धेरै राम्रा कारणहरू छन्, तर ती मध्ये तीनिहरू यसलाई मार्गमा राख्ने क्षमता राख्छन् जुन चेक गरिन्छ।
चेलो आयोजकहरु र "मोडरेटर" लाई डिजिटल विश्वको तपाईको कुनालाई सजिलैसँग चलाउन मद्दत पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ।
उदाहरण को लागी, तपाईको स्थानीय रेडियो क्लब को लागी एक च्यानल बनाउनु पर्छ भन्न को लागी। तपाईले पासवर्डलाई पहिलो "रक्षा रेखा" को रूपमा सुरक्षा गर्न सक्नुहुनेछ - केवल तपाईका सदस्यहरूले मात्र पासवर्ड थाहा पाउनेछन् र केवल तिनीहरू पहुँच गर्न सक्नेछन्। अहिले सम्म, यति राम्रो!
त्यसो भए तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ कि कुनै पनि नयाँ सदस्यहरू, सहि पासवर्ड प्रविष्ट गरेर "विश्वास" हुनु आवश्यक छ। यसको मतलव सबैजनाले एक सञ्चालकको भन्नु पर्खनु पर्छ-ताकि उनीहरूलाई त्यो च्यानलमा पूर्ण पहुँच दिनुहोस्।
तर त्यो सबै होइन!
एक पटक विश्वास गरेपछि, तपाईं "म्युट" हुन सक्नुहुन्छ (कुनै प्रसारण अधिकार छैन - केवल सुन्न अनुमति दिइन्छ), अवरुद्ध (कुनै पनि अवधिको लागि) वा संक्षेपमा लात पनि निकालियो!
म यो संग जाँदैछु जहाँ देख्न सक्नुहुन्छ?
यदि विगतमा ह्याम ब्यान्ड र रिपीटरहरूमा यो सम्भव भएको भए, खराब अपरेटि and र व्यवहार कतै पनि हुने थिएन।
तर एनालग संसारमा यो त्यति सजिलो छैन। एक डिजिटल दुनिया मा, यो कार्यान्वयन गर्न सजिलो छ!
म तपाईंलाई अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु - "नेटवर्क रेडियो" जेलो च्यानलहरू यस समयमा धेरै लोकप्रिय साबित भइरहेको छ, विशेष गरी यहाँ युकेमा। वास्तवमा ती दिनहरू पछाडि बढेको छ!
मध्यस्थकर्ताहरूको समर्पित समूहलाई धन्यवाद (जुन पनि दिन बित्दै गइरहेको देखिन्छ!) नयाँ आगमन ज्यादै हम्मा आधारित च्यानलमा उनीहरूको सम्भावित रुचिको लागि हल्का "अन्तर्वार्ता" लिएको छ।
सदस्यता धेरै लाइसेन्स प्राप्त एमेच्यर्स र लाइसेन्स बिना रेडियो (वा "PTT") उत्साहीहरुको एक मिश्रण हो, तर व्यवहार, शिष्टाचार र अपेक्षा बारे कडा नियमहरू छन्।
एक वा दुई पटक, मान्छेले चिन्ह हटाई सकेको छ र उनीहरुलाई केवल च्यानलबाट हटाईएको छ, चेतावनी दिएका छन् र कहिलेकाँही उनीहरूको व्यवहार लाई सुचारु गर्न दोस्रो मौका दिइन्छ। (कहिलेकाँही पनि हुँदैन, के भएको छ को गम्भीरता मा निर्भर…)
किनकि जेलोले सबै ओभरहरू रेकर्ड गर्न सक्दछ (यदि तपाइँ यसलाई बताउनुहुन्छ!), यो मध्यस्थकर्ताहरूको लागि वास्तवमा के भनिएको थियो सुन्न र विवादको मामिलामा प्रमाणको प्राथमिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्न एकदम सीधा छ।
अर्को शब्दहरु मा, परिस्थितिको आधारभूत कम को लागी कसैको आधार मा आवश्यकता छ सोचे अरु कसैले भने वा मतलब गर्यो। यदि मध्यस्थकर्ताहरूले आपत्तिजनक क्षण व्यक्तिगत रूपमा गुमाए पनि, तिनीहरूले यसलाई पुन: प्ले गर्न सक्दछन्, यदि यो लाइभ हो भने!
(डिजिटल) संसारमा खुशी
यो तब मॉडरेशनका केही "खुशी" हुन् - डिजिटल विश्वको "खुशी"।
फेरि एकचोटि, र म यस बारे मा हानि को लागी माफी माग्छु, तर प्रविधि ले हामीलाई एक पछाडि फ्याँक्यो। यदि हामी बाँच्न कोशिस जारी राख्यौं भने विशेष गरी एनालग संसारमा, सामान्यता को आनन्द हामीलाई उपलब्ध छैन। जहाँसम्म, यदि हामी के नयाँ डिजिटल अँगालो टेक्नोलोजी हाम्रो लागि गर्न सक्दछ, हामी हाम्रो धेरै सुधार गर्न सक्छौं।
यो नयाँ डिजिटल संसारमा, हामी आफ्नै पुलिसहरू र वास्तवमा हाम्रो आफ्नो इजाजतपत्र प्राधिकरण हुनसक्दछौं भनेर सुझाव दिन कुनै अति-अतिशयोक्ति छैन - वास्तवमा, हामी पहिले नै गरिरहेका छौं!
अन्तिम शब्द ...
सायद अन्तिम शब्द नेटवर्क रेडियो समूहको सदस्यमा जानुपर्दछ, जसले आफैंले यस हप्ता मात्रै फेसबुक ग्रुपमा च्यानलहरू लगायत पोष्ट गर्नुभयो, निम्न…
"व्यस्त, चाखलाग्दो, ठुलो टेक्न / रेडियो केन्द्रित स्थान सिर्जना गर्न र मद्दतको लागि प्रत्येक दिन सुन्ने मोडहरू र प्रयोगकर्ताहरूका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, अन्तमा म कारमा र घरमा पुनः सुन्न सक्छु र परिवारमा सुन्न सक्छु। बारेमा।
मेरो कान्छो ()) रेडियोमा हो। उनको आफ्नै पीएमआर रेडियो छ (गोपनीयता संग सेट अप ताकि उनी मात्र मलाई सुन्छ), हाम्रो निजी च्यानल मा Zello प्रयोग गर्दछ र फाउंडेशन टेस्ट लिन चाहन्छ!
हामी जहाँ बाहिर जान्छौं र रेडियोहरू आफैंमा लैजान्छौं, तर यहाँको स्थानीय बडबड रंगीन भाषाको साथ यति नराम्रो हुँदै गएको छ, नजिक-देखि-नक्कल इन्न्युन्डो / धुम्रपान र राजनीति कट्टरपन्थीले दागिएको छ जुन मलाई अब लाग्दैन। FT-70 खोल्ने विश्वास छ, बिहान स्कूल रनको बाहेक बाहेक यो वास्तवमै मरे पछि।
मैले डिभी Mini मिनी र रास्पबेरी पाई with सँग मोबाइल मोबाइल हटस्पट सँगै राखेका थिए सीक्यू-युकेमा ट्युन गर्न जुन असीमित रूपमा राम्रो छ र रेडियोको भावनाको लागि सत्य छ - कहिलेकाँही यो अलि अलि शान्त हुन्छ। म प्राय: एकल कल सुन्न बिना नै मेरो सम्पूर्ण कम्युट गर्न सक्दछु।
कार र घरमा जेलो र नेटवर्क रेडियोहरू फायर गर्दै, मलाई थाहा छ हामी एक सभ्य, स्वच्छ र सम्मानजनक छलफल सुन्न लागेका छौं - जुन हो जुन म सधैं एमेच्योर रेडियो क्रेको हुँ भनेर विश्वास गर्दछु - र मलाई १००% थाहा छ सीबी लटबाट सुन्न लागेका कुराहरु सुन्न को लागी यहाँ दुई मिटर को दूरी मा आफ्नो एक वाक्य ओभरहरु संग बहस, शपथ र धम्की कसैलाई 'एक भेट' दिन को लागी।
म मेरो टी 320२० आईपुग्न प्रतिक्षा गर्दैछु ... एफटी 70० आउनेछ ... मसँग घर छोड्दा अझै आउँनेछ, तर म आशा गर्दछु कि यसले झोलामा यात्रा सुरु गर्नुपर्नेछ जब बच्चाहरू वरिपरि छन्।
संक्षिप्तमा - कतै त्यो ठाउँ बनाउन खुशी छु, को लागी खुशी छ, सुन्न को लागी र मलाई थाहा छ कि एक ठाउँ को लागी मेरो छोरीलाई सोखबाट पूरै हटाउने छैन, तर उनको फाउन्डेशनको लागि जान प्रोत्साहित गर्नेछ (लाइसेन्स) )।
ताजा हावाको सास यो वास्तवमै छ र यो लामो हुन सक्छ। "
ठीक छ भने, सर! हामी लामो हुन सक्छौं सबै "मॉडरेशनको खुशी" का आनंद लिन जारी राख्नुहोस्!
जुन 12th, 2018
प्रकाशित 29 सक्छ, 2018
Anysecu 3G-W2 पहिलो भिडियो समीक्षा
हो, यो Zello संग काम गर्दछ! हो, यसले टीम स्पिक3(IRN) को साथ काम गर्दछ, हो तपाई Google Play बाट अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ।
राम्रो, भिडियो हेर्न र तपाईंको आफ्नै रेडियो कस्तो देखिन्छ हेर्नको लागि उत्तम हो!
र एक आश्चर्यको लागि तयार रहनुहोस्! यो एक सूक्ष्म आश्चर्य हो! के तपाईको लागि एउटा चाहानुहुन्छ? अर्डर गर्नुहोस्!
डीएमआर रेडियो (15)
हामी जनवरी 25 र फेब्रुअरी7बीच कुनै पनि अर्डर पठाउने छैनौं। तपाईं अझै पनि यी मितिहरूमा आफ्नो अर्डर राख्न सक्नुहुन्छ। खारेज